Nounkpọsa Transportgbọ njem site na Onye isi ala Yavaş gaa Ankara | RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraNewsgbọ njem Ozi Ọma na Ankara site n'aka Onye isi ala Yavaş
23 / 09 / 2019 06 Ankara, Central Anatolia Region, ụgbọ okporo ígwè, General, Ụzọ Awara Awara, KENSİÇİ Rail Systems, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Metro, Turkey
Onye isi ala nke vgbọ njem Yavastan na Ankara
Onye isi obodo nke Ankara Metropolitan Munso Mansur Yavaş kwupụtara mgbanwe njem na isi obodo ahụ.
Mayor Yavaş kọwara ozi ọma banyere njem njem n'izu Njikọ Njikọ nke Europe ma soro ụmụ amaala na-esite n'ụgbọ njem ọha, ndị na-adọba ụgbọala n'efu n'ụlọ ọrụ ụgbọ ala, ọrụ mgbazinye ụgbọ ala eletrik na ụzọ ịgba ígwè.
EGWU NKE CHAIRMAN YAVAŞ N'AKA AKW CKWỌ
Followinggbaso egwu egwu Haluk Levent a na-eme na Anıtpark, Onye isi ala Yavaş nyere ụmụ amaala Ba newskent ozi ọma tupu egwu egwu a.
Maazị Yavaş malitere okwu ya site na ikele ndị nwe obodo ahụ maka ikere òkè dị n'etiti ihe omume ndị a haziri n'ime oke nke Weeklọ Ọgba Ọzara na Europe wee gaa n'ihu dịka ndị a:
“Nke mbụ, m ga-achọ igosipụta afọ ojuju m. Anyị ji puku kwuru puku mmadụ mezue Nnukwu icygbọ njem Ankara. Site na 7 ruo 70, ndị Ankara jiri ụzọ niile na-enwe ọilyụ na udo. Ọ ga-amasị m ikele ụmụ amaala ibe m niile zara oku anyị ma sonye na ihe omume ahụ ọtụtụ. ”
N'ikwu na isi obodo chọrọ mgbanwe usoro njem ngwa ngwa, Mayor Yavaş kwuru, 'Anyị maara mgbanwe mgbanwe ihu igwe. Anyị chọrọ ime Ankara bụ obodo na-abụghị nke metụtara ụgbọ ala mana nke nwere nke mmadụ na nke mmekọrịta ya na gburugburu ebe obibi. ”
Ndị a bụ chi…
N'ịkọwapụta na ezinaụlọ chọrọ ebe dị iche iche ha ga na-eje, okporo ụzọ keke, na ogige ndị ga-eme ka mmadụ mata banyere obodo, Mayor Yavaş kwuru “anyị kwesịrị iwepụ okporo ụzọ, zere nsogbu okporo ụzọ ma bie ndụ ahụike karị”.
Onye-isi-nduzi Yavaş depụtara Oziọma njem banyere njem na-egbo mkpa nke ndị isi obodo na ndị isi ike:
- X kwa afọ na Ankara, ihe dị ka ụmụ amaala 400 nwụrụ n'ihe ọghọm okporo ụzọ. Anyi choro iwelata onu ogugu a rue opekata mpe ya na ihe anyi gha eme na oru ndi ga agba ume igafe ndi ọha.
- A na-agabiga mmachi ikuku ikuku na nkezi 250 ugboro kwa afọ. Ihe kachasị mkpa maka nke a bụ okporo ụzọ dị arọ. Anyị ga - echebe ahụ ike nke ndị anyị ma belata mmefu ahụike na ụzọ njem
- Nkeji 36 nkeji na-efu na okporo ụzọ kwa ụbọchị. Ebumnuche anyị belata oge a n'ọtụtụ dị elu ma gbochie iwepu oge na ego na ọmụmụ ihe anyị.
-Anyị ga-ewulite Ankara egwuregwu
-Anyị amalite atụmatụ isi njem njem nke ọma ebe anyị ga-akpụzi ọdịnihu nke akụrụngwa igwe obodo. Anyị ga-eji atụmatụ a soro ebumnuche anyị
- Anyị na-arụ ọrụ na teknụzụ nke ọrụ igwe kwụ otu ebe. Anyị na-eme atụmatụ iji wuchaa ọrụ ụgbọ elu anyị site na Ümitköy ruo Tandoğan n'ime otu afọ. Ihe dị ka kilomita 56. Anyị na-agbakọkwa sọlọtọ carbon monoxide n'okporo ụzọ a.
-Anyị chọrọ ego mgbazinye ego n’aka World Bank iji gbasaa network network keke na Ankara. Ọ bụrụ na anabatara anyị, anyị ga-achọ iji obodo anyịnya igwe
- Anyị na-agba igwe kwụ otu ebe na Ankara. N'agba nke mbu, anyị ga-eje ozi nke 17 igwe kwụ otu ebe na 400 ọdụ ụgbọ elu.
- Ejiri ụgbọ ala anyị EGO nwere ngwa anyịnya igwe arụ ọrụ. Anyị ga-eme ka ụgbọ ala 700 anyị dị mma maka njem ụgbọ ịnyịnya ígwè n'otu afọ
- Anyị na-eme steepụ na ụgbọ nke ọdụ ụgbọ ala anyị dị mma maka ibu anyịnya igwe. Ga-enwe ike iji igwe kwụ otu ebe na njem ọha. Anyị na-agbasi mbọ ike iji ngwa a na ụzọ ụgbọ oloko niile
-Will ga - enwe ike iburu igwe mpịachi gị na bọs anyị, belụsọ ma awa siri ike
-Anyị na-agbanye na ‘park and go’ sistemụ mmanụ. Iji zere ịnya ụgbọ ala n’etiti obodo, anyị na-amalite iwu ebe a na-adọba ụgbọala n’ọdụ ụgbọ mmiri anyị. Ndị na-eme njem nke ọha ga-enwe ike iji ebe a na-adọba ụgbọala na-akwụghị ụgwọ. Anyị ga na-abawanye ọnụ ọgụgụ ndị na-adọba ụgbọala a. ”
ỌRES Onye ỌRAL EGO WITHBARA MAKA CM SLAKA
N'ime ihe omume Mobọchị Mgbagharị Europe, ụmụ amaala malitere ị toa ntị na Onye isi ala Yavaş, onye malitere na Kuğulu Park, na-aga n'ihu na Tunalı Hilmi Street ma sonye na ihe omume ije na njedebe na Anıtpark.
Ije ije n'okporo uzo Onye isi ala Yavaş na-ekele ndi obodo; Onye isi oche ndị omeiwu Levent Gök, ndị omeiwu, ndị nnọchi anya EU, onye nnọchi anya European Union Delegation Ambassador Ambassador Christian Berger, Yenimahalle Mayor Fethi Yaşar, Çankaya Mayor Alper Taşdelen, EGO General Manager Nihat Alkaş, ndị nnọchite anya NGO na ọtụtụ ụmụ amaala sooro.
ỌH HA HALUK ghọrọ ụlọ ọrụ
Onye isi ala Yavaş nke lere egwu egwu egwu egwu nke Haluk Levent na Anıtpark kwuru na ụmụ amaala nke ụlọ ọrụ ndị dị otú ahụ na-eme ka ndị mmadụ mara na ha nwere obi ụtọ dị ukwuu.
Onye nnochite anya Dutch na Ankara Marjanne de Kwaasteniet sokwara ihe omume Njem Izu na European na akaụntụ mgbasa ozi ha ma nye ụmụ amaala na-ekerịta foto ha ma nwee mmasị na foto ndị kachasị.
Orchestra nke Obodo ukwu na Haluk Levent nyere mgbede amaara mgbaghara maka isi obodo ha.
Ozi Ọma Mansur Yavaş nyere ndị Ankara! .. 'Metros 5…
Transportgbọ njem site n’aka Onye isi ala
Mahadum Yildirim Beyazit Başkan
Ndị Onye Ọchịchị Yavaş na-ebute Ọganihu
Mayor Yavaş nyere şzer nke 100
Onye Isi ala Slow Nkwa Nwere Nkwa Ọzọ
President ji nwayọọ nwayọọ bịanye aka n'akwụkwọ banyere gburugburu ebe obibi
Ugbo ala nke Bangkok Subway Bozankaya na-arụpụta
Site na Prime Minister nye ụmụ amaala Ankara
Başkentray 1 Ọnwa Mgbe Ankara
Başkentray'ı Naara Ankara
Subzọ ụgbọ oloko Esenboğa nke Ankara, nke nọ na-eche kemgbe…
Ankara Bad Ankara ..! Ebe a na-adọba ụgbọala na 1 Lira…
Ụzọ Ankara Bicycle Road Project
Ozi Ọma Si Ankara